Owe-BIG NUZ usesungule iqembu | News24
How Eastern Cape's 'dagga belt' can score high returns
The Eastern Cape's 'dagga belt' has high unemployment and underused land, but could be ideal for cannabis production, says Wandile Sihlobo.
Owe-BIG NUZ usesungule iqembu
Sandile Makhoba, Ilanga LangeSonto
Durban - Ilungu leqembu lomculo elike lashisa izikhotha eseliqube iminyaka emibili kungacaci ukuthi kwenzekani ngalo, selisungule elalo iqembu lomculo okuthiwa lihlanganiswe izingwazi.
UMzi "Danger" Mkhwanazi oyilungu leBig Nuz, usungul;e iqembu elibizwa yiDangerous Crew. Ekuqapeni kwalo nyaka uMthokozisi "DJ Tira" Khathi umememzele ekhasini lakhe enkundleni yezokuxhumana ukuthi ezinhlelweni zakhe kulo nyaka uzosebenzisana neDangerous Crew kaDanger, ongaphansi kwenkampani kaDJ Tira Afrotainment.
Ekhuluma neLanga LangeSonto uTira uthi uDanger ufikile kuyena ezomtshela ngomsebenzi aphezu kwawo.
"Ikhona into esiyiphekayo noDanger kodwa isungulwe nguyena futhi usebenza namaciko ehlukene asemnkantshubomvu," kulanda uDJ Tira.
OLUNYE UDABA:OweBig NUZ uthi bayazikhohlisa abacabanga ukuthi bayahlukana
Uthi kuleli qembu akekho umculi osafufusa kodwa yizinkakha zodwa. Yize noma ethi abanye abakhona kuleli qembu akakabazi ngoba uDanger uzihlanganisela yena mathupha iDangerous Crew kodwa ubale uDJ Oskido, nguyena uTira, u-Efelow weqembu iWTF nabanye.
Umthombo waleli phephandaba osondelene naye uDanger ukuqinisekisile ukuthi abaculi baphuma bengena estudio sikaDanger, kuphekwa i-albhamu.
"Ngiyayesaba into ezokwenzeka, umlilo wodwa ophekwa laphaya njengoba noProfessor esefikile naye ukuzokwenza izingoma zayo neDangerous Crew" kuqhuba umthombo.
UTira uthi lo msebenzi uzosheshe uphume ngoba unyaka bafuna ukuwubamba usaqala.
"Ubonile kwenzekeni ngonyaka odlule. Abantu babonile ukuthi le nto yokukhipha unyaka usuphela iyabalimaza, yingakho nathi singeke silale, sizosebenza manje kusakhaya," kuchaza uTira.
Uqhube wathi yize engasazihlanganisi neBig Nuz kodwa uDanger uzomeseka kuze kube sekugcineni.
Ethintwa uDanger ngalolu daba walile ukuphawula, wacela intatheli ukuba ingalubhali lolu daba ngoba ufihle induku emqubeni.
"Ngicela sime kancane ngoba ngisematasa nomsebenzi, angifuni ukukhuluma into ingakapheli," kuqhuba uDanger obezwakala ukuthi unovalo akafuni ibhalwe le ndaba.